Maitiro ekuverenga bhaibheri kuti urinzwisise Discover ➡ Discover Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro ekuverenga bhaibheri kuti urinzwisise
Maitiro ekuverenga bhaibheri kuti urinzwisise. Kune nzira dzakawanda dzekuverenga Bhaibheri kuti urinzwisise. Zvisinei, munhu mumwe nomumwe anofanira chinja kuverenga kwako maererano neruzivo rwako yemagwaro.
Naizvozvo, zvinoenderana nezinga rauri, tinokupa mamwe mazano pane ungatangira kupi kuzvinzwisisa nemazvo.
1 Maitiro Ekuverenga Bhaibheri kuti urinzwisise: Matanho Ekutanga
2 Ndinofanira kuverenga Bhaibheri zvakateedzana sei?
2.1 1. Kana kuri kekutanga kusangana kwako neBhaibheri:
2.2 2. Kana iwe uchida kudzamisa ruzivo rwako ruzhinji nezveBhaibheri:
2.3 3.Mabhuku ekuverenga chero nguva:
2.4 4.Mabhuku epaunenge wawedzera kukwirisa:
3 Mabasa ekufambisa kana kugadzirisa kuverenga
Maitiro Ekuverenga Bhaibheri kuti urinzwisise: Matanho Ekutanga
Maitiro ekuverenga bhaibheri kuti unzwisise nenzira kwayo
Usati watanga, zvibvunze mubvunzo uyu: "¿Zvakawanda sei zvandinoziva nezveBhaibheri? ". Kunyangwe ndisina kuverenga, vamwe vanhu vakakura vachiteerera nyaya kubva mubible, asi vamwe havana kumbobvira vaita izvi zvekuonana neShoko raMwari. Iwe uri mumamiriro api ezvinhu?
Tanga nekusarudza Bhaibheri rako. Bhaibheri rakanga risina kunyorwa muSpanish, saka rakashandurwa. Kune shanduro zhinji muchiSpanish, kubva kudangwe, mururimi rwechinyakare, kusvika kune yazvino, asi yakaoma. Unogona kuisarudza muhomwe yehomwe kana vhezheni yakatsanangurwa netsananguro pazasi pendima.
Sarudza kuti inguvai yaunogona kupa zuva rega rega. Kana iwe uri mupfupi nenguva, verenga chitsauko kana zviviri pazuva. Kana iwe uine yakawanda nguva, iwe unogona kuverenga zvishoma zvishoma. Bhaibheri ibhuku remweya, saka zvakakoshawo kutora nguva shoma yekunamata uye kuyedza kunzwisisa zvauri kuverenga.
Bepa rega rega Bhaibheri rine index pamusoro. Saka kana iwe usingazive kune bhuku reBhaibheri, tsvaga iyo peji mune indekisi. Tora mukana kune zviwanikwa zvine rako Bhaibheri.
Ndinofanira kuverenga Bhaibheri zvakateedzana sei?
Bhaibheri rakatosiyana nemamwe mabhuku. Chaizvoizvo, iunganidzwa yemabhuku makumi matanhatu nematanhatu akarongedzwa nemhando yezvinyorwa (nhoroondo, nhetembo, chiporofita, evhangeri, epistolary ...), kwete mukuverenga, kana mukutevedzana. Saka kune avo vachangotanga, harisi zano rakanaka kuyedza kuverenga butiro kuti ufukidze.
1. Kana kuri kekutanga kusangana kwako neBhaibheri:
Tanga nerimwe remavhangeri mana kubva muTestamente Itsva:Mateo, Marcos, Lucas kana Juan. Ava vanhu vana vakanyora nhoroondo yaJesu, mumwe nemumwe kubva pane zvakasiyana maonero. Chero ipi yemabhuku aya ndichakuratidza kuti Jesu ndiani, mutambi mukuru wemuBhaibheri.
Mabasa eVaApostora kuverenga iyo nhoroondo yekutangwa kweChechi mushure mekumuka kwaJesu. Iri rinogona kuve rinonakidza bhuku re verenga uchitevera imwe yevhangeri.
Para nzwisisa zvakawanda nezve hupenyu hwechiKristu, unogona kuverenga mamwe mabhuku mushure meMabasa eVaApostora, senge VaRoma kana VaTesaronika. Aya mabhuku anozokubatsira iwe kuti unzwisise zvirinani ruponeso uye kuti hupenyu hwakasiyana sei mumashure. Aya matanho akanaka ekuti uwane kunzwisisika kwevhangeri.
2. Kana iwe uchida kudzamisa ruzivo rwako ruzhinji nezveBhaibheri:
Kutanga nekuverenga mabhuku enhoroondo eTestamente Yekare, kubva kuna Genesi kusvika kuna Estere. Aya mabhuku taura nyaya yekusikwa kwenyika uye vanozokubatsira kuti unzwisise mashandiro anoita Mwari munhoroondo yese. Zvakare vanotaura nyaya yevanhu veIzirairi uye nebasa ravo muhurongwa hwaMwari.
Mushure mekuverenga mabhuku mashanu ekutanga eBhaibheri, zvichave zvakanaka kuverenga bhuku raVaHebheru, muTestamente Itsva. Ramba uchifunga kuti mamwe emabhuku enhoroondo anotaura nyaya dzakadzokororwa, asi nenzira dzakasiyana.
Mabhuku echiporofita (kubva kunaIsaya kusvika kuna Maraki) taura kuti Mwari akayambira sei vanhu nekufamba kwenguva nezve izvo zvaizoitika. Kana iwe ukafunga kuverenga mabhuku aya, ipfungwa yakanaka kuyedza kuaverenga zvichiteerana uye kutsvaga mamiriro enhoroondo usati waverenga bhuku rimwe nerimwe.
Mabhuku e zviporofita yeTestamente Yekare nebhuku ra Apocalipsis, vanogona chaizvo zvakaoma kunzwisisar. Asi usazvidya moyo. Kunyangwe vakangwara veBhaibheri vanoziva vane kunetseka kuverenga mabhuku aya!
3.Mabhuku ekuverenga chero nguva:
Mabhuku e Mapisarema naZvirevo Ivo vanonakidza uye vanokurudzira kuverenga chero nguva, zvisinei kuti unoziva zvakadii nezveBhaibheri. Iyo mapisarema nhetembo nenziyo kutendeseka kwazvo kuna Mwari uye bhuku raZvirevo rine zvakawanda kuraira kwehungwaru kwehupenyu hwezuva nezuva.
4.Mabhuku epaunenge wawedzera kukwirisa:
Nziyo: idzi nhetembo dzinotaura nezvekukosha kwerudo pakati pemurume nemukadzi.
Muparidzi: chiratidzo chekusava nebasa kwezvose zvisina Mwari.
basa: ibhuku rinoongorora mibvunzo yakaoma kwazvo nezvekutambura, pasina kupa mhinduro dziri nyore.
Mabasa ekufambisa kana kugadzirisa kuverenga
Iyi mienzaniso iri pamusoro ingori mashoma mazano ekuverenga Bhaibheri. Iwewo unogona kudaro tarisa kumusoro kuverenga zvirongwa online kana mumabhuku, izvo zvingave zviri nani kukodzera mamiriro ako.
Edza taura nemupristi, mufundisi, kana mumwe munhu ane ruzivo rwakanyanya rweBhaibheri. Munhu uyu anogona kukubatsira kuti ugadzire chirongwa chakanaka chako uye upindure yako yese mibvunzo.
Kana iwe uchienda nguva dzose kuchechi, Iwe uchadzidza zvakawanda nezveBhaibheri uye mashandisiro aro kuhupenyu hwako. Kereke iboka revanhu vakaziva kudiwa kwavo kuti vaungane pamwechete kuti vaverenge, vadzidze, uye vanzwisise Bhaibheri.
Kune zvakare zviwanikwa zvinoverengeka pamhepo uye mumabhuku, senge kuzvipira kwemazuva ese, zvinyorwa, zvinyorwa zveBhaibheri, nezvimwe.. kukubatsira kuti unzwisise zvirinani zvinyorwa zveBhaibheri, senge maduramazwi, mepu, ruzivo nezvenhoroondo uye tsika yenguva yacho. Ukasadzidza, imhaka yekuti haudi!
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira iwe kuti uzive kuverenga sei bhaibheri kuti urinzwisise. Kana ikozvino iwe uchida kuziva iyo chikonzero nei Jesu akatuka muonde, ramba uchivhura Ziva.online.
Sei Judhasi akatengesa Jesu